'Resident Evil 2' Remake က E3 Trailer ကိုလက်ခံရရှိပြီးထုတ်ပြန်ချိန်။ - iHorror
ပင်မစာမျက်နှာ ဗီဒီယိုဂိမ်းများ 'Resident Evil 2' Remake က E3 Trailer ကိုလက်ခံရရှိပြီးထုတ်ပြန်ချိန်။
'Resident Evil 2' Remake က E3 Trailer ကိုလက်ခံရရှိပြီးထုတ်ပြန်ချိန်။
by အဲရစ် Panico ဇြန္လ 12, 2018
ကရေးသား အဲရစ် Panico ဇြန္လ 12, 2018
အဆိုပါ Playstation E3 ကွန်ဖရင့်က ၁၉၉၈ ရဲ့ဒဏ္survivalာရီရှင်သန်မှုထိတ်လန့်ဖွယ်ဂန္ထဝင်အတွက်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောဇာတ်ကားကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် Resident Evil 2! မနှစ်က Resident Evil7နောက်ပိုင်းဂိမ်းများသည်အရေးယူမှုများနှင့်လျင်မြန်သောအချိန်ဖြစ်ရပ်များအပေါ်အလွန်အမင်းမှီခိုလာပြီးနောက်ဂိမ်း၏ထိတ်လန့်ဖွယ်အမြစ်များကိုပြန်လည်ရောက်ရှိစေသည်။ အခု Capcom ကကျွန်မတို့ကိုရောဂါစတင်အစပြုခဲ့ပါပြီ။
Resident Evil2franchise ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သောကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောလေထုဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်စီးရီးတွင်အကောင်းဆုံးဂိမ်းတစ်ခု၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပထမဆုံး အိမ်တွင်းမကောင်းဆိုးဝါး ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင်အလွန်အောင်မြင်သော HD remaster ကိုရရှိခဲ့ပြီးပရိသတ်များသည် ထိုအချိန်မှစ၍ အံ့သြမိန်းမောခဲ့ကြသည် Resident Evil2တူညီတဲ့ကုသမှုခံယူလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့သိုလှောင်စင်ပေါ်တလျှောက်တွားနှင့်ရဲအရာရှိတစ် ဦး မမြင်ရသောသံသယရှိသူနှင့်တစ် ဦး ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုသို့ရောက်ရသက်သေအဖြစ်အဖြစ်နောက်တွဲယာဉ်တစ် ဦး စပ်စုရှုထောင့်ကနေဖွင့်လှစ်။ ကျနော်တို့အကြံပေးချက်များအပေါ်ဆောက်ထားတဲ့ခဲ့ကြသည်ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းနှင့်အမျှငါတို့ (ယခုနှိပ်စက်) ကြွက်များ၏မျက်စိမှတဆင့်ဖြစ်ပျက်မျက်မြင်ခဲ့ကြသည်ထုတ်ဖော်ပြသ ရဲကသူ၏သွားများကိုရဲသား၏လည်ပင်းထဲသို့နစ်မြှုပ်ထားသည့်အသားတုံးတစ်ထည်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်သည်။
လူသစ် Leon Leon ကနေဒီသည်သူ၏ဆေးလိပ်သောက်နေသည့်ဘေးနှင့်အတူတံခါးဝ၌လှုပ်နေသည်ကိုတွေ့မြင်နေစဉ်ရိုက်ချက်ထွက်လာပြီးဖုတ်ကောင်သည်သက်မဲ့ (အမှန်တကယ်သေသွားသည်) မြေပေါ်သို့ကျသွားသည်။ အဲဒီနောက်နောက်တွဲယာဉ်ကကျွန်တော်တို့ကို grunge, အော်သံနှင့်သွေးထွက်သံယို sinew ၏ cacophony နှင့်အတူဝင်တိုက်။
Capcom သည်ကြောက်မက်ဖွယ်ရာကို ၁၁ အထိအထိတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ နောက်တွဲယာဉ်သေတ္တာများသိသိသာသာမှောင်လာပြီးပိုမိုပြင်းထန်လာသည်။ ဌာနေဘေးဥပဒ် ၇)။ ဇွဲထက်သန်သောကလဲရက်ဖီးလ်ဒ်သည်သူမအောင်ပွဲသို့ပြန်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည်။
မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းနေသောလမ်းများမှသွေးယိုစီးနေသောအတွင်းပိုင်းများသို့ကျွန်ုပ်တို့ဖြတ်သန်းစဉ် Raccoon City သည်ဘယ်သောအခါမျှထူးခြားစွာနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ နောက်တွဲယာဉ်တွင်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကောင်းသောဇာတ်ကောင်များပါ ၀ င်သော၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသောအလင်းရောင်နှင့်အလွန်မှောင်မိုက်သောပုံရိပ်များရှိသည်။ ကားတွေမီးလောင်ကျွမ်းနေတယ်၊ ​​ဖုတ်ကောင်တွေကနေရာတိုင်းမှာလှုပ်နေတယ်၊ ​​ငါတို့အိပ်မက်ဆိုးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာအချို့ကိုတောင်ငါတို့မြင်ဖူးတယ်။ ဖုတ်ကောင်များနှင့် Lickers များနှင့် Tyrants ... အိုး။
Gamespot ဂိမ်းပြန်ပြောင်းသွားပြီဟုအတည်ပြုသတင်းထုတ်ပြန် Resident Evil 7's ပခုံးပေါ်မှတတိယလူမှပထမလူပုဂ္ဂိုလ် POV ။ သို့ရာတွင်၊ ဂိမ်းသည်လျင်မြန်စွာလှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆန့်ကျင်။ ကြောက်မက်ဖွယ်တွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေပုံရသည်။ ဖုတ်ကောင်များသည်အချိန်နှင့်တပြေးညီ“ ချက်ချင်းမြင်နိုင်သောပျက်စီးမှု” များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ကျေးဇူးတင်စရာမှာပရိသတ်များသည် Raccoon City ၏ဖုတ်ကောင်များပြည့်နေသောလမ်းများကိုတစ်ဖန်လမ်းလျှောက်ရန်ကြာမြင့်စွာမစောင့်ရသေးပါ။ နောက်တွဲယာဉ်သည်ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်ဖြန့်ချိမည့်နေ့ကိုအတည်ပြုသည်thPlaystation 2019, Xbox One နှင့် PC များတွင်ဂိမ်းကို ၀ ယ်ယူရန်ကြိုတင်မှာယူမှုများရရှိနိုင်ပါသည်။
နောက်တွဲယာဉ်ကိုမင်းဘယ်လိုထင်သလဲ။ ! Raccoon City ကိုပြန်ဖို့မင်းစိတ်လှုပ်ရှားပါသလား။ သင်၏ထင်မြင်ချက်များကိုမှတ်ချက်များတွင်တင်ပါ။
'Hereditary' သည် A24 ၏အကြီးမားဆုံးဖွင့်ပွဲဖြစ်သည်
'Death Stranding' E3 Trailer သည်ဖြောင့်ဖြောင့်။ ထူးဆန်းသောအရာဖြစ်သည်
Crypt TV နှင့် 'Dead by Daylight' အဖွဲ့သည် ...
'Resident Evil Village' ၏နောက်တွဲယာဉ်သစ်သည်ပိုမိုနက်နဲသောအရာများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်
Dino Shooter 'Second Extinction' သည်Aprilပြီလတွင်ရောက်မည်
HP Lovecraft ၏ 'Arkham ထိတ်လန့်ခြင်း - မိခင်၏ရင်ခွင်ပိုက်' ထဲသို့ ...
ဧပြီလ 2, 2021
'Resident Evil Re: အခန်းငယ်' ဖွင့်လှစ် Beta ယခုThisပြီလ
မတ်လ 23, 2021
'ဆယ်ကျော်သက် Mutant Ninja လိပ်: Shredder ရဲ့လက်စားချေ'
'Aliens: Fireteam' နောက်တွဲယာဉ်သည်သင်နှင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ...
မတ်လ 2, 2021
အဆိုပါ Xenomorph '' Fortnite '' သို့နစ်မြုပ်ခံရဖို့ပုံရသည် ...
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 24, 2021